02 La dagaalankii biyaha - Ku soo dhowow Nederland
Waddanka Nederland waa waddan biyeed. Qaybo badan dhulka Nederlad ahi waxay ku yaaliin meel badda ka hoosaysa. Waana meesha ay Nederland magaceeda ka qaadatay. Erayga 'neder' macnahiisuu waa 'hoos'. Haddii aanay jirin biyo xidheeno, iyo kanaalo biyaha la mariyo dhulka badhkii biyaha ayuu ka hoos marayaa. Wakhtiyadii hore dad badan oo reer Nederland ah ayaa daadad ku dhintay. Sidaa daraadeed mar kasta biyo-xidheenada waa la sii badiyaa si loo ilaaliyo dad badan oo biyuhu khatar ku hayaan.
Meelo biyo ku jireen ayaa dhul laga dhigay. Marka hore meeshii biyuhu ku jireen ayaa dhinac kasta laga moosay, dabadeedna iyadoo 'windmolens' la isticmaalayo ayaa biyihii la nuugay, oo meel la isugu geeyey. Sidaas ayaa Nederland dhul dheeraad ah ku heshay. Tusaalaha ugu caansani waa gobolka Flevoland. 1932-dii ayaa biyihii moos lagu wareejey, dabadeedna si tartiib ah ayaa dhul badan biyihii looga faaruqiyey, oo dhul bannaan laga dhigay, dhulkaasoo hadda beero aad u wax soo saar badan laga dhigay. Dad badan oo reer Nederland ayaa aad ugu faraxsan arrintan.
1953-dii waxaa Nederland ka dhacay fatahaad weyn, taasoo dad 1800 ku dhinteen, gaar ahaan gobolka Zeeland. Dabadeedna dawladu waxay diyaarisay qorshe ay ugu magac dartay Deltaplan, si aanay masiibadan oo kale mar dambe u dhicin. Qorshahan Deltaplan waxaa dhammaystirkiisii qaatay ilaa 1997-dii. Mooskii ama biyo-xidheenadii jirey kor ayaa loo qaaday, biyo badan ayaa meello gaar ah la isugu geeyey, kanaalo ayaana la jeexay. Meelaha biyaha la isugu geeyey waxaa ugu magac dheer Oosterscheldedam.
Tani waxay keentay inay Nederland khibrad ku yeelato arrintan dhulka biyuhu ku jiraan, ee banaanka laga dhigayo. Waddamo badan ayaa Nederland caawimaad weydiista marka biyo-xidheeno la dhisayo. Tusaale ahaan Nederland waxay Dubai kala shaqaysay inay jasiirado ka samayso badda dhexdeeda. Waxay kaloo Nederland gacan ka geysatay daadkii ka dhacay gobolka New Orleans ee Maraykanka 2005-tii.
Wax lala yaabo maaha in erayo Dutch ah oo arrintan biyaha khuseeya laga isticmaalo waddamo kale.
Dijk, oo ingiriisku yidhaahdo dike.
Polder, oo laga isticmaalo waddamada ingiriiska ku hadla.
Sluis oo ingiriis ahaan sluice la yidhaahdo.